နေ့: စက်တင်ဘာလ 13 2019
Malatya, Diyarbakir ခရီးစဉ်သားမွေးလိုင်းစခန်းများမိုင်အကွာအဝေး: + 380 550 380-950 တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး5၏နူးညံ့၏ရလဒ်အဖြစ်ပြုမိပတျဝနျးကငျြ + ။ ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး 2019 Malatya အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့ (TCDD) 392548 / 284.148,83 419.347,00 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို TL နှင့် TL, [ပို ... ]
ယနေ့တွင် 14 စက်တင်ဘာလ 1908 Anatolia နှင့် Orient မီးရထားအလုပ်သမားများကသမိုင်းအတွက်သပိတ်ပေါ်သွား၏။ အလုပ်သမားများနာရီ 10,5 8,5 နာရီလျှော့နာရီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်။ လစာအလုပျသမားအချိန်ကုမ္ပဏီ 20 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်တစ်နှစ်ခွဲလစာဆုကြေးငွေရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်။ [ပို ... ]
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ဘောကျင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 990.5 ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့ဝင်ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ ဒီနှစ် 435.7 သန်းဒေါ်လာသင်္ဘောစက်မှုလုပ်ငန်း၏ပထမငါးလကနေပထမဦးဆုံးပို့ကုန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ဘောကျင်းယခုနှစ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကိန်းဂဏန်းများထက်ကျော်လွန်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Omer က Aydin "Ordu, Samsun-မတ်စောက်သောရထားလမ်းတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤမီးရထားကုန်သွယ်ရေး, ခရီးသွားလုပ်ငန်းလူတန်းစားလူနေမှုအဆင့်အတန်းကျော်သွားပါလိမ့်မည် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် CLASS ရထားလမ်းစီးတီးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Omer က Aydin ၏ကြည်းတပ်မှပြန်လည်ကောင်းမွန် [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen, နုသတ်မှတ်ချက်များများအတွက်ဘဏ်ထဲမှာ 2020-2023 နှစ်ပေါင်း TCDD ပရိုမိုးရှင်းအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ပါလိမ့်မည်, တိုးမြှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်မြှင့်တင်ရေးပမာဏကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ကျန်နေသေးခံရဖို့ချင်တယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen, နုသတ်မှတ်ချက်များ TCDD စာရင်းကိုင်များအတွက်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုဖျောပွတရားဝင်စာတစ်စောင် [ပို ... ]
"လှုပ်ရှားမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှတူရကီစီမံကိန်း Erzurum အတွက်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်း" Erzurum အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံန်ကြီးဌာနနှင့်ဥရောပယူနီယံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားမိမိခရီးစဉ်အတွင်းစကားပြောဝန်ကြီး Turhan, သူဟာ join ဖို့မြို့ဆီသို့ရောက် လာ. , ကဆိုသည်။ Turhan, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ [ပို ... ]
ယင်းချန်ပီယံ Ng Afyon အားကစားနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပွဲတော်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းကျင်းပသည့်သမ္မတများ၏အောက်ရှိကျင်းပကမ္ဘာ့ဖလား Motocross ချန်ပီယံရှစ်, Afyonkarahisar မြူနီစီပယ်နှင့်တူရကီမော်တော်ဆိုင်ကယ်အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပူးပေါင်း. ပြီးစီးခဲ့လျက်ရှိသည်, ကြီးသောစိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့အဖွဲ့အစည်းများ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် auspices မှာအရပျကိုလုယူသော [ပို ... ]
Alanya အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးပွဲတော်သည်ယခုနှစ်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်ဒုတိယအကြိမ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစတင်ခဲ့သည်။ Alanya ချစ်သူများဆိုင်ကယ်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ပွဲတော်နောက်တဖန်က၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဆိုးရွားသောရာသီဥတုအခြေအနေနေသော်လည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်မြို့ပတ်ပတ်လည်ကနေ 24 200 ကလူ [ပို ... ]
Balıkesirမြူနီစီပယ်, ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်လုပ်နေတာယာဉ်ရပ်နားလိုင်းများနှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်နှင့်လူသွားလူဘေးကင်းလုံခြုံမှုလူကူးမျဉ်းကြားလိုင်းများသေချာစေရန်နိုင်ရန်အတွက်မြို့တွင်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းအတွက်အသွားအလာစီးဆင်းမှု။ က "ပထမဦးဆုံးအောက်မှာပြင်ဆင်အဖွဲ့လူကူးဖြတ်" လမ်းသွားလမ်းလာဦးစားပေးယာဉ်အသွားအလာများ Year " [ပို ... ]
Bilecik မြူနီစီပယ်နှင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်စီမံကိန်းကို '' သင်္ချာ Stop အတွက် '' ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု '၌ပြင်ဆင်ကြ၏။ ရှိတ် Edebali ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာရပ်နားမှာကျင်းပတဲ့မြှင့်တင်ရေးဖြစ်ရပ်; လက်ထောက်မြို့တော်ဝန်အိန်ဂျယ် Bywater လှံ, ပညာရေးဿွာန်သံမဏိ, Kozabirlik ၏ဒါရိုက်တာ [ပို ... ]
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Speaking နိုင်ငံတော်သမ္မတ Ekrem Yüceမတိုင်မီ Sakarya Sakarya ဖလား MTB XCO-XCM လူမျိုးတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်သည့်စက်တင်ဘာလအကြား 13-15, "ကျနော်တို့ကမြူနီစီပယ်အဖြစ်စက်ဘီးစီးအားကစားကိုထောကျပံ့များဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းငါတို့မွို့စက်ဘီးဟုခေါ်သည် [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, နိုင်ငံသားများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျော့ပါးစေရန်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့်မတ်လ 2019 နှစ်ပေါင်း Gebze ဖွင့်လှစ် - Halkalı D-100 အချက်၏အခြားဘက်ခြမ်းကနေÇayırovaမီးရထားဘူတာရုံများနှင့်အဆင်ပြေလမ်းဖို့ Fatih နှင့်နိုင်ငံသားများအပေါ် Marmaray လိုင်း Gebze [ပို ... ]
ယခုနှစ် 2019 နူးညံ့သောရက်စွဲ၏အဆုံးအဖြစ် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကိုကံမကောင်းနေဆဲတရားဝင်ထုတ်ဖော်ဘူး။ သားကောင်များအနေဖြင့်ဒေသတွင်းသိုက် ပို. ပို. စိုးရိမ်ပူပန်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကြီးထွားလာကြသည်ကြေညာခံရဖို့ဧရိယာမှပြောင်းရွှေ့ကြသူနိုင်ငံသားတွေ! ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ် [ပို ... ]
တူညီသော Marmaray မှာမက်ထရို Marmaray ကနေအကူးအပြောင်းအတွက်မြေအောက်ရထားလိုင်းကို၏ကျမ်းပိုဒ်၌ရှိသကဲ့သို့လည်းအစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ၏ဝယ်လိုအားဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluဟုသူကဆိုသည် "ငါသင်တန်းပေးဖို့ပို့ဆောင်ရေး၏ဤတောင်းဆိုမှုကိုန်ကြီးဌာနမျှဝေဖို့သွားမယ်" အဲဒီညွှန်ပြ, ခိုင်လုံသောလွှဲပြောင်းဖြစ်, ထက် [ပို ... ]
တူရကီစီမံကိန်း Erzurum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးအတွက်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုပုံများဟာဘာကူ-Kapıkuleအစာရှောင်ခြင်းသံကိုသူကသူတို့စီမံကိန်းအတွက်အလုပ်၏အဆုံးချဉ်းကပ်သောလမ်းအကြားစီစဉ်ထား, Erzurum အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသွားရောက်ကြည့်ရှု, Mehmet Cahit Turhan တက်ရောက်ရန်မြို့သို့ရောက်လေ၏။ ဝန် [ပို ... ]
အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ရန်တူရကီအတွက်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်း Erzurum ၏အသုံးပြုပုံများကိုမွို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan ဆီသို့ရောက် လာ. , Erzurum အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသွားရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Turhan အိုကေ Memis နှင့်ဒုတိယဝန်ကကြိုဆိုဝန်ကြီးများမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ခရီးစဉ်, [ပို ... ]
Erzurum တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Mehmet Tab ကို "Erzurum လက်လှမ်းတစ်မြို့အဖြစ်, သငျသညျကျွန်တော်တစ်ဦးမြို့စေမည်ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ တူရကီနှင့်တူရကီရှိ "ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်ကောက်ယူအီးယူ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာနကပူးတွဲရန်ပုံငွေ [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan, Erzurum တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Mehmet Sekmen သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဝန်ကြီး Turhan, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ Erzurum သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူအားလုံးရှုထောင့်၌ထင်ရှားဟုပြောသည်။ တူရကီနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကပူးတွဲရန်ပုံငွေ, [ပို ... ]
အဆိုပါလွဲသွားမတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နံနက်ယံ၌ရထားများဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏အရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တန်ဂန်ယိဒေသအနည်းဆုံး 50 လူတွေသေဆုံးကနဦးအစီရင်ခံချက်များအရသိရသည်ကွန်ဂို။ ရိုက်တာသတင်းဌာနအဆိုအရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာဝန်ကြီးစတိဗ်မြို့မှာ Mbika အဆိုပါ Mayibari အနိုင်ရခဲ့သည်ကိုးကား [ပို ... ]